ယတိပြတ်မှငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်လုံခြုံရေး ကဏ္ဍအဖွင့်
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁- ရာစုပင်လုံ (စတုတ္ထအကြိမ်)ကို ယခုသြဂုတ်လ ထဲတွင် ကျင်းပတော့မည်။ ကိုဗစ်ကာလကြီးထဲမှာမို့ ခေတ်ပြိုင်သမိုင်း၌တော့ အချိန်ကာလအပေါ် မှတ်မှတ်သားသား ပြောစမှတ် ဝင်ပေမည်။ နောက်တစ်ချက်က ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်များ သက်တမ်းတွင် ယခုအကြိမ်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် တစ်ချက်က ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးအကြိုလည်း ဖြစ်နေခြင်းပင်။
ဤညီလာခံကြီး၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ “ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စု”ဟူ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) အခန်း(၁)၊ အပိုဒ် (၁)၊ အပိုဒ်ခွဲ(၁) တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။ NCA မှ တစ်ဆင့် လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဤအဓိကရည်မှန်းချက်ဆီပေါက်မြောက် ရောက်ရှိ ရေးသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ့အနာဂတ်ကို တိုက် ရိုက် အချိုးကျချက်လည်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်… ဘယ်လောက်နီးပြီလဲ၊ ဘယ်လောက် ရောက်ပြီလဲ၊ ဘယ်လောက်ဝေးသေးလဲ… ။ ပြည် ထောင်စုသည် ဘယ်လိုနေရာဆီ ဆက်လက်ရွေ့လျား နေသည်လဲ။ မေးခွန်းတွေ များစွာ၊ နည်းလမ်းတွေ များစွာမှာ လက်ရှိ ပကတိကိုအခြေခံသော အရှိ (Reality) အပေါ် အရှိအတိုင်းမြင်ကြမှ တိုးတက်ပေ မည်။ လက်ရှိအရှိကနေသာ သွားနေကြသည်ကသာ ခရီးပိုပေါက်မြဲဟူသည့် လောကဓမ္မတာနိယာမက ဆိုးကောင်းကြောင်းကျိုး ပြခဲ့၊ ပြနေသည်။
လက်ရှိအစိုးရနှင့် ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်များ သက်တမ်းအတွင်း ကျင်းပခဲ့ပြီးသော ညီလာခံအကြိမ် ၃ ကြိမ်တွင် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အချက်ပေါင်း ၅၁ ချက် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ မှတ်တမ်းတင်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကို မှန်မှန်အရွေ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု (Progressive Realization) ဟု မြင်ကြသူများ၊ နည်းပါးသေးသည် ဟု အားမလိုအားမရဖြစ်သူများ၊ အလယ်အလတ် သဘောထားသူများ၊ စောင့်ကြည့်သူများ .. အမျိုးမျိုး ရှိကြသည်။ နှစ် ၇၀ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခဆိုသည့်အချက်၊ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု အများအပြားဆိုသည့်အချက်၊ တခြားတခြားသော၊ များစွာသော ပြောနေကျ အချက်တွေကိုလည်း ထည့် သွင်းကြည့်မြင်ပါ၊ ယတိတော့လည်း ပိုပြတ်ပေးကြပါ၊ ပိုပိုပြတ်ပေးကြပါဟု Stake Holders များအားလုံးကို ထပ်မံတောင်းဆိုအပ်ပါ၏။ (ဤက စကားချပ်ဖြစ် သည်)။
သဘောတူအတည်ပြု ၅၁ ချက်လုံးသည်ကတော့ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်အောက်က အချက်များချည်းပဲဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်း ခွင့်ဆိုင်ရာတွေထဲမှတချို့ဖြစ်ကြသော အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတွေထဲက ဖြစ်ကြသည်။ တချို့ ဟူသည် တချို့ဟုသာ ဆိုလိုသေးခြင်း၊ ပြော၍ရသေး ခြင်းကိုတော့ သတိပြုပါ။
မူရင်းမူလရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ]ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသောပြည်ထောင်စု}တွင် ဖက်ဒရယ်ကို အခြေခံသောဒီမိုကရေစီလား၊ ဒီမိုကရေစီ ကိုအခြေခံသော ဖက်ဒရယ်လား၊ ပြည်ထောင်စု ဟူရာ၌ရော ဒီမိုကရေစီဘယ်လောက်ပါဝင်၍ ဖက် ဒရယ်ဘယ်လောက် ဆိုနိုင်သလဲ… စသည်တို့ကို ယနေ့တိုင် ဝေါဟာရတ္တဒီပနီ ဖွဲ့မဆုံး မဖြစ်နေစေချင် တော့ပါ။ အနှစ်အသားကိုသာ ဤနေရာ၌ ယူကြရမည် ဖြစ်၍ပင်။ အခြားတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်လျှင်တော့ ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာမှာတင် လုံးခြာလည်နေသေးသလို ဒီမိုကရေစီအရာမှာလည်း အားနည်းနေသေးသော ကြောင့် ဆွေးနွေးမှုတွေ သောင်မတင်ရေမကျ ခဏခဏ ဖြစ်နေကြရခြင်းဟု မြင်တွေ့နေရပြန်ပါ၏။ ဤစာတွင် တော့ ဒီမိုကရေစီကို၊ ဖက်ဒရယ်ကိုအနက်ပြန်ဖွင့်ရန် ရည်စူးသည်မဟုတ်၍ လိုရင်းသောပြောဖြစ်ဦးပါမည်။ အခြေခံလောက် တွေကိုတာ့ သေချာကျန သိနားလည် ပြီးသူများ ဖြစ်နေကြပြီဟု ယူဆသောကြောင့်ပင်။ ထို့ထက်ပိုဆိုရသော် နှလုံးသွင်းပြီးသူများဖြစ်ကြပြီး လက်တွေ့ကျသူများဟုလည်း ယူဆ၍ဖြစ်သည်။ ပိုင်းဖြတ်ရည်သန်ချက်ရေချိန်… ဒါက ပိုအရေးပါ စကားပြောလာနေချိန် ဖြစ်နေပြီဟု မြင်ထားပါ၏။
သေချာတာတချို့ကို အသေအချာပြောပါမည်။ ဖက်ဒရယ်အတွက် အရေးအပါဆုံးအခြေခံတွေထဲမှာ မရှိမဖြစ်မလုပ်မဖြစ်တစ်ချက်က ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်၏။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှ တစ်ဆင့်သာ သွားကြရမည် ပင်။ မြန်မာသည်လည်း ထိုသဘောတရား နိယာမ အောက်မှာပဲရှိပါ၏။ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးတို့တွင်လည်း ကာလအလိုက် အပစ်ရပ်ခြင်း၊ သဘောတူငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမျိုးတွေ အပြင် အခိုင်အကျည်သန္ဓိဋ္ဌာန်နှင့် လုပ်ငန်းအဝ၀ကို ပိုချောမွေ့စေသော နည်းစနစ်ဆိုင်ရာပညာရပ်များဖြင့် ဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်ကြရမြဲပင်ဖြစ်သည်။
စကားဆက်စပ်အနည်းငယ်ပြောပါမည်။ နည်း စနစ်တွေ၊ ပညာရပ်တွေနှင့် ထိပ်ပိုင်းကျ ခေါင်းဆောင်မှု… ဘယ်ဟာကပိုအရေးကြီးလို့လဲဆိုသော အတွင်းစည်း ထဲမှ အသံတချို့ ဟိုတလောလေးက ကြားလိုက်ရသေး သောကြောင့် ဤကိစ္စကို တမင်ထည့်ပြောလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့နေရာနှင့်သူ အရေးကြီးပါ၏။ ကျင့်ဝတ် အခြေပြု နည်းစနစ်ပညာရပ်တို့ကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာ ရင်း နဂိုမူလပန်းတိုင်ကျရည်မှန်းချက် ယတိပြတ် စိတ်ထား ပိုခိုင်မြဲစေသောကြောင့်ဟု ဆိုလိုပါ၏။ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲ ပါဝင်နေကြသူ အားလုံး တွင် ဤစိတ်ထားကိုတစ်ရံမလပ် လေ့ကျက်နေကြသင့် သည်ဟု ပြောလိုရင်းလည်းပါပါသည်။ ပိုကောင်းသော၊ အလုပ်ပိုဖြစ်သော အိုင်ဒီယာတွေရနိုင်သလို ပြန်လှန် တိုးတက်ဆွေးနွေးနိုင်ကြသောကြောင့်ဟု တိုက်တွန်း လိုပါသည်။ အချက်အလက်နှင့် သတင်းတို့ကိုလေ့လာ ခြင်းအပြင် ဆန်းစစ်ဝေဖန်သုံးသပ်စွမ်းရည် ပိုတက် စေသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာတို့ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး လေ့ကျက်နေကြရပါမည်။ ဒါက ဗျူရိုကရေစီယန္တရား တစ်ရပ်ကို နက်ရှိုင်းသိမ်မွေ့လှသော နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ယဉ်ပါးစေချက်နှင့်အတူ အဓိကပွိုင့် ရောက်ပါက ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းက ချက် ချင်းဖော်လိုက်၍ ရစေနိုင် သော၊ လေ့ကျင့်မှုတစ်ရပ်ကို လည်း ရစေသော အားသာ ချက်ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေ သည်။ ယတိပြတ်မှ ငြိမ်းချမ်း ရေး ဟူသော မဟာဗျူဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင် ရာ နည်းနာ အတွင်းက တစ်ချက်ဖြစ်၏။ ဗျူဟာမြောက် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုလုပ် ငန်းစဉ် များသည် အပြန်အလှန် ဆက် စပ်မှီခိုနေမှုများ၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းများ များစွာဖြင့် ဖော်ဆောင်ကြရပါ သည်။ ပြောင်းလဲလာသော နိုင်ငံ့ဝန်းကျင်နှင့် တွေ့ကြုံမှု အသစ်များ၊ အခြေအနေ အားလုံးနှင့် ဆက်စပ်စဉ်းစား လုပ်ကြရမည်ပင်ဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသလေလေ ပိုခရီးရောက်ကြလေ လေပင်ဖြစ်သည်။ စစ်ဘုရင်ဝါဒအတွေးအယူများနှင့် ပြောင်းပြန်ချည်း သာဖြစ်သည်။ ဤလောက်ထိကို သဘောမျှခြေတစ်ရပ် ရောက်လာပါက ရှေ့တစ်ဆင့် တက် Escalating နိုင် ကြပေပြီ။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင်တစ်ဆင့်မက ရွေ့တက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်တစ်ချက်မှာ ယနေ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်း ရေး ဖြစ်စဉ်တွင် အတည်ပြုပြီး ၅၁ ချက်ထဲ၌ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အချက်တစ်ချက်မှ မပါဝင်သေးပါ။
မြန်မာ့အခင်းအကျင်းသည် ဖက်ဒရယ်ကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ထူထောင်ခြင်းဖြစ်စေ၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကို ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေပြုတည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်စေ သွားကိုသွားရ၊ လျှောက်ရမည်ထဲတွင် ငြိမ်းချမ်း ရေးဖြစ်စဉ်ပြီးမြောက် မှတ်တစ်ရပ်သို့ ရေရာသေချာ ရောက်မှ ဖြစ်ပေမည်။ ငြိမ်းချမ်း ရေးဖြစ်စဉ် ပြီးမြောက် အောင် မြင်ရေးတွင်လည်း နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍများတွင် သာမကဘဲ လုံခြုံ ရေးကဏ္ဍတွင်ပါ သေချာကျန သဘောတူညီချက်များအင်မတန် လိုအပ်ပါ၏။ နိုင်ငံ ရေးကဏ္ဍမှ စီးပွားစီမံအုပ်ချုပ်မှုများ၊ လူမှု စီးပွား ဆိုင်ရာနှင့် အငြင်းပွား ပြဿနာများ၊ မြေနှင့်သယံ ဇာတဆိုင်ရာများ…အကြောင်း ကိစ္စအားလုံးသည် ဤ DDR/SSR တို့တွင် တိုက်ရိုက်ရော သွယ်ဝိုက်ပါ ဆက်စပ်နေကြပါ သည်။
လုံခြုံရေးကဏ္ဍသည် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ထဲ၌ တမင်ဖယ်ထား အကြောင်းအရာ တော့ ဟုတ်ဟန်ရှိမဖြစ် နိုင်ပါ။ အချိန်မကျသေးဟု တမင် စောင့် နေသည်ဟူ၍လည်း မည်သူကမျှပြောထွက်နိုင် မည် မဟုတ်လောက်ပါ။ မရဲ၍ ကျွဲပြဲမစီးဟု ဆိုရလောက် အောင်လည်း လုံခြုံရေးကဏ္ဍက ကျွဲပြဲကြီး မဟုတ်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူလိုစိတ်ကိုသာ ယတိ ပြတ်အထွဋ် တင်ထားလျှင် စေ့စပ်ဆွေးနွေးပြီး သေချာ ရရှိနိုင်သည့် အကြောင်းခြင်းရာသာဖြစ်ပါသည်။
ရေရှည်တည်ငြိမ်းချမ်းရေးအမြင်နှင့်အယူတွင် ကန့် (Immanuel Kant) ၏ ကမ္ဘာကျော် Perpetual Peace ကို ဒီမိုကရက်တစ်ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် လစ်ဘရယ် ငြိမ်းချမ်းရေး (Democratic Peace and Liberal Peace) ဆိုင်ရာများဆီအထိ ဖြန့်ကျက်လိုက်သောအခါ –
(၁) အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အင်စတီကျူး ရှင်းဆိုင်ရာအရ ချဉ်းကပ်ပုံ [Structural – Institutional Approach]
(၂) စံပုံစံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအရ ချဉ်းကပ်ပုံ [Normative- Cultural Approach] ဟူ၍ ၂ မျိုးသာရှိသည်။ မြန်မာသည် နှစ်မျိုးလုံး ဝင်၏။ ကြည့်မြင်ပုံမှပြောရမည်ဆိုလျှင် Monadic နှင့် Dyadic ဟု နှစ်မျိုးရှိရာ၌ အတွင်းပိုင်းအဆောက်အအုံ များ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် အလုပ်လုပ်ခြင်းကို ပြသော ပထမရှုထောင့် Monadic ကသာ ပိုမိုကြည့်ရမည်ဖြစ် သည်။ Dyadic က စစ်ဖြစ်နေသောနိုင်ငံတွေကြား ကြည့်ရတာများ၍ဖြစ်သည်။
ချဉ်းကပ်ရချက်နှင့် ကြည့်မြင်ရချက် အားလုံး သော လက်ရှိပကတိများအရ၊ Statistical Evidences အရ ခြုံသုံးသပ်လိုက်လျှင် ယနေ့အနေအထားသည် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် လုံခြုံရေးကဏ္ဍကို စတင်ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးသင့်ချိန်ဟု မြင်ပါသည်။ အောင်မြင်သွားသော ငြိမ်းချမ်းရေးများကို ကာလရှည် အသေးစိတ်လေ့လာပြီး တွေ့ရှိချက်ပြန်ဖော်ပြသော ကျမ်းများအရ အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြချက်တို့တွင်လည်း လစ်ဘရယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအလွန်အထိ ဖော်ထုတ်ပြ ထားကြသည်။ မပါမဖြစ်နှင့် သင့်လျော်အပ်စပ်ချိန်အရ လုံခြုံရေးကဏ္ဍကို တခမ်းတနားပြဆိုကြသည် ချည်း သာ။ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၏ အခရာကျလှသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူဘောင် (The Framework for Political Dialogue) အခန်း(၅)၊ အခန်းခွဲ (ဃ) လုံခြုံရေးတွင် (၁) နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် (၂) လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းရေး ကိစ္စရပ်များဟု ပါဝင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံရေး တစ်စုံလုံးမှကြည့်လျှင် ရေရှည်အတွက်ပါ စတင်ဆွေး နွေးထားသင့်ပြီဟု ယူဆပါသည်။
နက်နဲလှသော ပညာရပ်ဆိုင်ရာတွေထက် လက်တွေ့မှာ ဘာလုပ်တာက ပိုမြန်ဆန်ထိရောက် အားကောင်း စေမည်လဲ… ဟု တစ်ချက်တည်းဖြေ အမေးမျိုးကိုတော့ မဖြေရတန်ကောင်းပါ။ ပြင်ဆင် ရမည်တို့ကို အားလုံးခြုံပြောရပါလျှင်တော့…။ မဆန်း လှတော့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအရာတွင် ဘယ် သောအခါမှ မရိုးသွားမည့် အဆိုတစ်ရပ်နှင့် ပြောလိုပါ ၏။ လက်တွေ့ကျလှသောသိပ္ပံပညာက ကမ္ဘာကျော် ]…ပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းပြောဖူးသော စကားဖြစ် သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဟူသည်ကို အင်အားသုံးခြင်းဖြင့် တော့ ဘယ်လိုမှမရနိုင်။ နားလည်မှု ရယူတည် ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြင့်သာ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြီးမြောက် နိုင်ပါ၏…} (Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.)
လုံခြုံရေးဆိုရာတွင် ကိုယ့်တပ်ဖွဲ့ ကိုယ့်အုပ်စု လုံခြုံရေးမျှလောက်တော့ မဟုတ်ပေ။ လက်နက်ကိုင် ထားတိုင်း နယ်မြေအသီးသီးတွေမှာ ပြည်သူတွေ လုံခြုံပါ၏လော။ တိုင်းပြည်လုံခြုံအေးချမ်းနေပါ၏လော။ တပ်မတော် အပါအဝင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းတိုင်း သေသေချာချာ စဉ်းစားတွေးဆကြရုံ တင်မက အဖြေကိုပါ ထုတ်ပေးပြပေး လုပ် ပေးကြရပါ တော့မည်။ အရေးပါလှသောပွိုင့်ဖြစ်သည့် ခေါင်း ဆောင်များ၏ ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ဆုံမှတ်ရောက်နိုင်ရန် ကလည်း လိုအပ်လှသည်ဖြစ်ရာ ဖက်ဒရယ်စနစ် တည် ထောင်အောင်မြင်နေသော နိုင်ငံများမှ လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အယူအဆနှင့် လက်တွေ့များကို သေချာ လေ့လာ စတင်ဆွေးနွေး ထူထောင်တည်ဆောက်ယူကြ ရမည်သာပင်။ ထင်ရှား တွေ့ရှိချက်အရတော့ နိုင်ငံများ သည် ဖြတ်သန်းခဲ့သောသမိုင်းကြောင်းနှင့် လက်ရှိ မျက်မှောက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး လိုအပ် ချက်များအရ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒအခြေခံကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင် ထည့်သွင်း ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းထားတတ်ကြမြဲဖြစ်သည်။ သို့ငြား လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေအများစုကိုတော့ ၄င်းတို့၏လွှတ်တော် များမှ ပြဋ္ဌာန်းသော Legislative Law, Act or Statue ဥပဒေများ၌သာ ရေးဆွဲကြ၍ ဖွဲ့စည်းပုံပါ အခြေခံ ကျောရိုးကိုလည်း နိုင်ငံတော်အတွက် ပိုမိုအားကောင်း အောင် လုပ်ကြလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်… ဆိုခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးကဏ္ဍအစပျိုး ရင်း ဤစာကို ဒီမှာ ခဏတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပါမည်။ ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့တွေ ကတော့ အမြောက်အများ၊ တင်းကြမ်းပင်။
ခိုင်မာစစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးထူထောင်နိုင်မှ ပိုမိုပီပြင်အားကောင်းသော ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ် စနစ်ကို တရားမျှမျှတတ၊ တန်းတူညီမျှစွာ အနှစ်သာရ ရှိရှိ တည်ဆောက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသား အားလုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်သည် ကြီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မည်သာ။ အဓွန့် ရှည်နိုင်မည်သာ။
ကျမ်းကိုးနှင့် ဆက်လက်လေ့လာရန် အညွှန်း တချို့ –
(၁) NCA နှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူဘောင်။
(၂) ခေတ်ရှုခင်း၊ အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၁)၊ ၂၀၁၄။
(၃) ဘာကြောင့်ဖက်ဒရယ်လဲ၊ ဘာကြောင့်ငြိမ်းချမ်း ရေးလဲ အေးမောင်ကျော်၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၃၊ ဓူဝံစာပေ)။
(၄) လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ (မင်းတင်၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၃၊ လူငယ်တစ်ယောက်စာအုပ်တိုက်)။
(၅) Strategies of Peace ( Transforming Conflict inaViolent World ), 2010, Oxford University Press
(၆) ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာ အခြေခံဥပဒေနှင့် ပြဋ္ဌာန်း ဥပဒေများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အာဏာများကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာများ (MIPS – Myanmar Institute for Peace and Security) သုတေသန စာတမ်း၊ MIPS, Dec, 2019 .
(၇) Immanuel Kant, Perpetual Peace. In Kant: Political Writings (Cambridge University Press, 1991).
(၈) The Democracy Sourcebook. The MIT Press, 2003.
ယတိပွတျမှငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ တိုကျရိုကျဆကျစပျလုံခွုံရေး ကဏ်ဍအဖှငျ့
ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ ၂၁- ရာစုပငျလုံ (စတုတ်ထအကွိမျ)ကို ယခုသွဂုတျလ ထဲတှငျ ကငျြးပတော့မညျ။ ကိုဗဈကာလကွီးထဲမှာမို့ ခတျေပွိုငျသမိုငျး၌တော့ အခြိနျကာလအပျေါ မှတျမှတျသားသား ပွောစမှတျ ဝငျပမေညျ။ နောကျတဈခကျြက ဒုတိယအကွိမျလှတျတျောမြား သကျတမျးတှငျ ယခုအကွိမျကနောကျဆုံးဖွဈပွီး နောကျထပျ တဈခကျြက ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲကွီးအကွိုလညျး ဖွဈနခွေငျးပငျ။
ဤညီလာခံကွီး၏ အဓိကရညျမှနျးခကျြမှာ “ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ဖကျဒရယျစနဈကို အခွခေံသော ပွညျထောငျစု”ဟူ၍ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA) အခနျး(၁)၊ အပိုဒျ (၁)၊ အပိုဒျခှဲ(၁) တှငျ ဖျောပွပါရှိသညျ။ NCA မှ တဈဆငျ့ လကျရှိငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျနှငျ့ခြိတျဆကျ၍ ဤအဓိကရညျမှနျးခကျြဆီပေါကျမွောကျ ရောကျရှိ ရေးသညျ နိုငျငံတျောနှငျ့ ပွညျသူ့အနာဂတျကို တိုကျ ရိုကျ အခြိုးကခြကျြလညျးဖွဈသညျ။ ဒီမိုကရစေီစနဈနှငျ့ ဖကျဒရယျစနဈ… ဘယျလောကျနီးပွီလဲ၊ ဘယျလောကျ ရောကျပွီလဲ၊ ဘယျလောကျဝေးသေးလဲ… ။ ပွညျ ထောငျစုသညျ ဘယျလိုနရောဆီ ဆကျလကျရှလြေ့ား နသေညျလဲ။ မေးခှနျးတှေ မြားစှာ၊ နညျးလမျးတှေ မြားစှာမှာ လကျရှိ ပကတိကိုအခွခေံသော အရှိ (Reality) အပျေါ အရှိအတိုငျးမွငျကွမှ တိုးတကျပေ မညျ။ လကျရှိအရှိကနသော သှားနကွေသညျကသာ ခရီးပိုပေါကျမွဲဟူသညျ့ လောကဓမ်မတာနိယာမက ဆိုးကောငျးကွောငျးကြိုး ပွခဲ့၊ ပွနသေညျ။
လကျရှိအစိုးရနှငျ့ ဒုတိယအကွိမျလှတျတျောမြား သကျတမျးအတှငျး ကငျြးပခဲ့ပွီးသော ညီလာခံအကွိမျ ၃ ကွိမျတှငျ ဖကျဒရယျဆိုငျရာအခကျြအလကျမြားအပျေါ ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးခဲ့ကွရာ အခကျြပေါငျး ၅၁ ခကျြ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပွီး ပွညျထောငျစုလှတျတျော၌ မှတျတမျးတငျအတညျပွုနိုငျခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။ ဒါကို မှနျမှနျအရှဖွေ့ဈပျေါတိုးတကျမှု (Progressive Realization) ဟု မွငျကွသူမြား၊ နညျးပါးသေးသညျ ဟု အားမလိုအားမရဖွဈသူမြား၊ အလယျအလတျ သဘောထားသူမြား၊ စောငျ့ကွညျ့သူမြား .. အမြိုးမြိုး ရှိကွသညျ။ နှဈ ၇၀ ပွညျတှငျးစဈနှငျ့ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခဆိုသညျ့အခကျြ၊ တိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျစု အမြားအပွားဆိုသညျ့အခကျြ၊ တခွားတခွားသော၊ မြားစှာသော ပွောနကြေ အခကျြတှကေိုလညျး ထညျ့ သှငျးကွညျ့မွငျပါ၊ ယတိတော့လညျး ပိုပွတျပေးကွပါ၊ ပိုပိုပွတျပေးကွပါဟု Stake Holders မြားအားလုံးကို ထပျမံတောငျးဆိုအပျပါ၏။ (ဤက စကားခပျြဖွဈ သညျ)။
သဘောတူအတညျပွု ၅၁ ခကျြလုံးသညျကတော့ ဖကျဒရယျဆိုငျရာ နိုငျငံရေးခေါငျးစဉျအောကျက အခကျြမြားခညျြးပဲဖွဈပါသညျ။ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျး ခှငျ့ဆိုငျရာတှထေဲမှတခြို့ဖွဈကွသော အုပျခြုပျရေးနှငျ့ စီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာတှထေဲက ဖွဈကွသညျ။ တခြို့ ဟူသညျ တခြို့ဟုသာ ဆိုလိုသေးခွငျး၊ ပွော၍ရသေး ခွငျးကိုတော့ သတိပွုပါ။
မူရငျးမူလရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျ ]ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ဖကျဒရယျစနဈကို အခွခေံသောပွညျထောငျစု}တှငျ ဖကျဒရယျကို အခွခေံသောဒီမိုကရစေီလား၊ ဒီမိုကရစေီ ကိုအခွခေံသော ဖကျဒရယျလား၊ ပွညျထောငျစု ဟူရာ၌ရော ဒီမိုကရစေီဘယျလောကျပါဝငျ၍ ဖကျ ဒရယျဘယျလောကျ ဆိုနိုငျသလဲ… စသညျတို့ကို ယနတေို့ငျ ဝေါဟာရတ်တဒီပနီ ဖှဲ့မဆုံး မဖွဈနစေခေငျြ တော့ပါ။ အနှဈအသားကိုသာ ဤနရော၌ ယူကွရမညျ ဖွဈ၍ပငျ။ အခွားတဈဖကျကပွနျကွညျ့လြှငျတော့ ဖကျဒရယျဆိုငျရာမှာတငျ လုံးခွာလညျနသေေးသလို ဒီမိုကရစေီအရာမှာလညျး အားနညျးနသေေးသော ကွောငျ့ ဆှေးနှေးမှုတှေ သောငျမတငျရမေကြ ခဏခဏ ဖွဈနကွေရခွငျးဟု မွငျတှနေ့ရေပွနျပါ၏။ ဤစာတှငျ တော့ ဒီမိုကရစေီကို၊ ဖကျဒရယျကိုအနကျပွနျဖှငျ့ရနျ ရညျစူးသညျမဟုတျ၍ လိုရငျးသောပွောဖွဈဦးပါမညျ။ အခွခေံလောကျ တှကေိုတာ့ သခြောကနြ သိနားလညျ ပွီးသူမြား ဖွဈနကွေပွီဟု ယူဆသောကွောငျ့ပငျ။ ထို့ထကျပိုဆိုရသျော နှလုံးသှငျးပွီးသူမြားဖွဈကွပွီး လကျတှကေ့သြူမြားဟုလညျး ယူဆ၍ဖွဈသညျ။ ပိုငျးဖွတျရညျသနျခကျြရခြေိနျ… ဒါက ပိုအရေးပါ စကားပွောလာနခြေိနျ ဖွဈနပွေီဟု မွငျထားပါ၏။
သခြောတာတခြို့ကို အသအေခြာပွောပါမညျ။ ဖကျဒရယျအတှကျ အရေးအပါဆုံးအခွခေံတှထေဲမှာ မရှိမဖွဈမလုပျမဖွဈတဈခကျြက ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈ၏။ အပဈအခတျရပျစဲရေးမှ တဈဆငျ့သာ သှားကွရမညျ ပငျ။ မွနျမာသညျလညျး ထိုသဘောတရား နိယာမ အောကျမှာပဲရှိပါ၏။ ငွိမျးခမျြးရေး၊ အပဈအခတျရပျစဲ ရေးတို့တှငျလညျး ကာလအလိုကျ အပဈရပျခွငျး၊ သဘောတူငွိမျးခမျြးရေး စာခြုပျခြုပျဆိုခွငျးမြိုးတှေ အပွငျ အခိုငျအကညျြသန်ဓိဋ်ဌာနျနှငျ့ လုပျငနျးအဝဝကို ပိုခြောမှစေ့သေော နညျးစနဈဆိုငျရာပညာရပျမြားဖွငျ့ ဖျောဆောငျလုပျကိုငျကွရမွဲပငျဖွဈသညျ။
စကားဆကျစပျအနညျးငယျပွောပါမညျ။ နညျး စနဈတှေ၊ ပညာရပျတှနှေငျ့ ထိပျပိုငျးကြ ခေါငျးဆောငျမှု… ဘယျဟာကပိုအရေးကွီးလို့လဲဆိုသော အတှငျးစညျး ထဲမှ အသံတခြို့ ဟိုတလောလေးက ကွားလိုကျရသေး သောကွောငျ့ ဤကိစ်စကို တမငျထညျ့ပွောလိုကျရခွငျး ဖွဈသညျ။ သူ့နရောနှငျ့သူ အရေးကွီးပါ၏။ ကငျြ့ဝတျ အခွပွေု နညျးစနဈပညာရပျတို့ကို ထဲထဲဝငျဝငျ လလေ့ာ ရငျး နဂိုမူလပနျးတိုငျကရြညျမှနျးခကျြ ယတိပွတျ စိတျထား ပိုခိုငျမွဲစသေောကွောငျ့ဟု ဆိုလိုပါ၏။ လကျရှိငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျထဲ ပါဝငျနကွေသူ အားလုံး တှငျ ဤစိတျထားကိုတဈရံမလပျ လကေ့ကျြနကွေသငျ့ သညျဟု ပွောလိုရငျးလညျးပါပါသညျ။ ပိုကောငျးသော၊ အလုပျပိုဖွဈသော အိုငျဒီယာတှရေနိုငျသလို ပွနျလှနျ တိုးတကျဆှေးနှေးနိုငျကွသောကွောငျ့ဟု တိုကျတှနျး လိုပါသညျ။ အခကျြအလကျနှငျ့ သတငျးတို့ကိုလလေ့ာ ခွငျးအပွငျ ဆနျးစဈဝဖေနျသုံးသပျစှမျးရညျ ပိုတကျ စသေော ပညာရပျဆိုငျရာတို့ကိုလညျး အတတျနိုငျဆုံး လကေ့ကျြနကွေရပါမညျ။ ဒါက ဗြူရိုကရစေီယန်တရား တဈရပျကို နကျရှိုငျးသိမျမှလှေ့သော နိုငျငံရေးဆိုငျရာ ယဉျပါးစခေကျြနှငျ့အတူ အဓိကပှိုငျ့ ရောကျပါက ခေါငျးဆောငျမှုအပိုငျးက ခကျြ ခငျြးဖျောလိုကျ၍ ရစနေိုငျ သော၊ လကေ့ငျြ့မှုတဈရပျကို လညျး ရစသေော အားသာ ခကျြကိုလညျး ဖွဈပျေါစေ သညျ။ ယတိပွတျမှ ငွိမျးခမျြး ရေး ဟူသော မဟာဗြူဟာ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျ ရာ နညျးနာ အတှငျးက တဈခကျြဖွဈ၏။ ဗြူဟာမွောကျ ငွိမျးခမျြးရေး တညျဆောကျမှုလုပျ ငနျးစဉျ မြားသညျ အပွနျအလှနျ ဆကျ စပျမှီခိုနမှေုမြား၊ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျတတျခွငျးမြား မြားစှာဖွငျ့ ဖျောဆောငျကွရပါ သညျ။ ပွောငျးလဲလာသော နိုငျငံ့ဝနျးကငျြနှငျ့ တှကွေုံ့မှု အသဈမြား၊ အခွအေနေ အားလုံးနှငျ့ ဆကျစပျစဉျးစား လုပျကွရမညျပငျဖွဈသညျ။ ပရျောဖကျရှငျနယျ ပီသလလေေ ပိုခရီးရောကျကွလေ လပေငျဖွဈသညျ။ စဈဘုရငျဝါဒအတှေးအယူမြားနှငျ့ ပွောငျးပွနျခညျြး သာဖွဈသညျ။ ဤလောကျထိကို သဘောမြှခွတေဈရပျ ရောကျလာပါက ရှတေ့ဈဆငျ့ တကျ Escalating နိုငျ ကွပပွေီ။ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးမှု မူဘောငျတဈဆငျ့မက ရှတေ့ကျခွငျးလညျး ဖွဈသညျ။
နောကျထပျတဈခကျြမှာ ယနေ့ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြး ရေး ဖွဈစဉျတှငျ အတညျပွုပွီး ၅၁ ခကျြထဲ၌ လုံခွုံရေး ဆိုငျရာ အခကျြတဈခကျြမှ မပါဝငျသေးပါ။
မွနျမာ့အခငျးအကငျြးသညျ ဖကျဒရယျကို ဒီမိုကရစေီနညျးကြ ထူထောငျခွငျးဖွဈစေ၊ ဒီမိုကရစေီ နိုငျငံကို ဖကျဒရယျစနဈအခွပွေုတညျဆောကျခွငျး ဖွဈစေ သှားကိုသှားရ၊ လြှောကျရမညျထဲတှငျွငွိမျးခမျြး ရေးဖွဈစဉျပွီးမွောကျ မှတျတဈရပျသို့ ရရောသခြော ရောကျမှ ဖွဈပမေညျ။ ငွိမျးခမျြး ရေးဖွဈစဉျ ပွီးမွောကျ အောငျ မွငျရေးတှငျလညျး နိုငျငံရေး ကဏ်ဍမြားတှငျ သာမကဘဲ လုံခွုံ ရေးကဏ်ဍတှငျပါ သခြောကနြ သဘောတူညီခကျြမြားအငျမတနျ လိုအပျပါ၏။ နိုငျငံ ရေးကဏ်ဍမှ စီးပှားစီမံအုပျခြုပျမှုမြား၊ လူမှု စီးပှား ဆိုငျရာနှငျ့ အငွငျးပှား ပွဿနာမြား၊ မွနှေငျ့သယံ ဇာတဆိုငျရာမြား…အကွောငျး ကိစ်စအားလုံးသညျ ဤ DDR/SSR တို့တှငျ တိုကျရိုကျရော သှယျဝိုကျပါ ဆကျစပျနကွေပါ သညျ။
လုံခွုံရေးကဏ်ဍသညျ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေး ဖွဈစဉျထဲ၌ တမငျဖယျထား အကွောငျးအရာ တော့ ဟုတျဟနျရှိမဖွဈ နိုငျပါ။ အခြိနျမကသြေးဟု တမငျ စောငျ့ နသေညျဟူ၍လညျး မညျသူကမြှပွောထှကျနိုငျ မညျ မဟုတျလောကျပါ။ မရဲ၍ ကြှဲပွဲမစီးဟု ဆိုရလောကျ အောငျလညျး လုံခွုံရေးကဏ်ဍက ကြှဲပွဲကွီး မဟုတျပါ။ ငွိမျးခမျြးရေးရယူလိုစိတျကိုသာ ယတိ ပွတျအထှဋျ တငျထားလြှငျ စစေ့ပျဆှေးနှေးပွီး သခြော ရရှိနိုငျသညျ့ အကွောငျးခွငျးရာသာဖွဈပါသညျ။
ရရှေညျတညျငွိမျးခမျြးရေးအမွငျနှငျ့အယူတှငျ ကနျ့ (Immanuel Kant) ၏ ကမ်ဘာကြျော Perpetual Peace ကို ဒီမိုကရကျတဈငွိမျးခမျြးရေး နှငျ့ လဈဘရယျ ငွိမျးခမျြးရေး (Democratic Peace and Liberal Peace) ဆိုငျရာမြားဆီအထိ ဖွနျ့ကကျြလိုကျသောအခါ –
(၁) အဆောကျအအုံပိုငျးဆိုငျရာနှငျ့ အငျစတီကြူး ရှငျးဆိုငျရာအရ ခဉျြးကပျပုံ [Structural – Institutional Approach]
(၂) စံပုံစံနှငျ့ယဉျကြေးမှုဆိုငျရာအရ ခဉျြးကပျပုံ [Normative- Cultural Approach] ဟူ၍ ၂ မြိုးသာရှိသညျ။ မွနျမာသညျ နှဈမြိုးလုံး ဝငျ၏။ ကွညျ့မွငျပုံမှပွောရမညျဆိုလြှငျ Monadic နှငျ့ Dyadic ဟု နှဈမြိုးရှိရာ၌ အတှငျးပိုငျးအဆောကျအအုံ မြား ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျ အလုပျလုပျခွငျးကို ပွသော ပထမရှုထောငျ့ Monadic ကသာ ပိုမိုကွညျ့ရမညျဖွဈ သညျ။ Dyadic က စဈဖွဈနသေောနိုငျငံတှကွေား ကွညျ့ရတာမြား၍ဖွဈသညျ။
ခဉျြးကပျရခကျြနှငျ့ ကွညျ့မွငျရခကျြ အားလုံး သော လကျရှိပကတိမြားအရ၊ Statistical Evidences အရ ခွုံသုံးသပျလိုကျလြှငျ ယနအေ့နအေထားသညျ မွနျမာငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျတှငျ လုံခွုံရေးကဏ်ဍကို စတငျထညျ့သှငျး ဆှေးနှေးသငျ့ခြိနျဟု မွငျပါသညျ။ အောငျမွငျသှားသော ငွိမျးခမျြးရေးမြားကို ကာလရှညျ အသေးစိတျလလေ့ာပွီး တှရှေိ့ခကျြပွနျဖျောပွသော ကမျြးမြားအရ အနှဈခြုပျဖျောပွခကျြတို့တှငျလညျး လဈဘရယျငွိမျးခမျြးရေးအလှနျအထိ ဖျောထုတျပွ ထားကွသညျ။ မပါမဖွဈနှငျ့ သငျ့လြျောအပျစပျခြိနျအရ လုံခွုံရေးကဏ်ဍကို တခမျးတနားပွဆိုကွသညျ ခညျြး သာ။ မွနျမာ့ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျ၏ အခရာကလြှသော နိုငျငံရေးဆှေးနှေးမှုမူဘောငျ (The Framework for Political Dialogue) အခနျး(၅)၊ အခနျးခှဲ (ဃ) လုံခွုံရေးတှငျ (၁) နိုငျငံတျောကာကှယျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ (၂) လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ပေါငျးစညျးရေး ကိစ်စရပျမြားဟု ပါဝငျပွီးဖွဈသောကွောငျ့ နိုငျငံရေး တဈစုံလုံးမှကွညျ့လြှငျ ရရှေညျအတှကျပါ စတငျဆှေး နှေးထားသငျ့ပွီဟု ယူဆပါသညျ။
နကျနဲလှသော ပညာရပျဆိုငျရာတှထေကျ လကျတှမှေ့ာ ဘာလုပျတာက ပိုမွနျဆနျထိရောကျ အားကောငျး စမေညျလဲ… ဟု တဈခကျြတညျးဖွေ အမေးမြိုးကိုတော့ မဖွရေတနျကောငျးပါ။ ပွငျဆငျ ရမညျတို့ကို အားလုံးခွုံပွောရပါလြှငျတော့…။ မဆနျး လှတော့သျောလညျး ငွိမျးခမျြးရေးအရာတှငျ ဘယျ သောအခါမှ မရိုးသှားမညျ့ အဆိုတဈရပျနှငျ့ ပွောလိုပါ ၏။ လကျတှကေ့လြှသောသိပ်ပံပညာက ကမ်ဘာကြျော ]…ပညာရှငျကွီး အိုငျးစတိုငျးပွောဖူးသော စကားဖွဈ သညျ။ ငွိမျးခမျြးရေးဟူသညျကို အငျအားသုံးခွငျးဖွငျ့ တော့ ဘယျလိုမှမရနိုငျ။ နားလညျမှု ရယူတညျ ဆောကျနိုငျခွငျးဖွငျ့သာ ငွိမျးခမျြးရေး ပွီးမွောကျ နိုငျပါ၏…} (Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding.)
လုံခွုံရေးဆိုရာတှငျ ကိုယျ့တပျဖှဲ့ ကိုယျ့အုပျစု လုံခွုံရေးမြှလောကျတော့ မဟုတျပေ။ လကျနကျကိုငျ ထားတိုငျး နယျမွအေသီးသီးတှမှော ပွညျသူတှေ လုံခွုံပါ၏လော။ တိုငျးပွညျလုံခွုံအေးခမျြးနပေါ၏လော။ တပျမတျော အပါအဝငျ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ အစညျးတိုငျး သသေခြောခြာ စဉျးစားတှေးဆကွရုံ တငျမက အဖွကေိုပါ ထုတျပေးပွပေး လုပျ ပေးကွရပါ တော့မညျ။ အရေးပါလှသောပှိုငျ့ဖွဈသညျ့ ခေါငျး ဆောငျမြား၏ ယတိပွတျဆုံးဖွတျဆုံမှတျရောကျနိုငျရနျ ကလညျး လိုအပျလှသညျဖွဈရာ ဖကျဒရယျစနဈ တညျ ထောငျအောငျမွငျနသေော နိုငျငံမြားမှ လုံခွုံရေး ဆိုငျရာ အယူအဆနှငျ့ လကျတှမြေ့ားကို သခြော လလေ့ာ စတငျဆှေးနှေး ထူထောငျတညျဆောကျယူကွ ရမညျသာပငျ။ ထငျရှား တှရှေိ့ခကျြအရတော့ နိုငျငံမြား သညျ ဖွတျသနျးခဲ့သောသမိုငျးကွောငျးနှငျ့ လကျရှိ မကျြမှောကျ နိုငျငံရေး၊ စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး လိုအပျ ခကျြမြားအရ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ မူဝါဒအခွခေံကို ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမြေားတှငျ ထညျ့သှငျး ရေးဆှဲ ပွဋ်ဌာနျးထားတတျကွမွဲဖွဈသညျ။ သို့ငွား လုံခွုံရေး ဆိုငျရာ ဥပဒအေမြားစုကိုတော့ ၎င်းငျးတို့၏လှတျတျော မြားမှ ပွဋ်ဌာနျးသော Legislative Law, Act or Statue ဥပဒမြေား၌သာ ရေးဆှဲကွ၍ ဖှဲ့စညျးပုံပါ အခွခေံ ကြောရိုးကိုလညျး နိုငျငံတျောအတှကျ ပိုမိုအားကောငျး အောငျ လုပျကွလရှေိ့ကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ… ဆိုခွငျးနှငျ့ လုံခွုံရေးကဏ်ဍအစပြိုး ရငျး ဤစာကို ဒီမှာ ခဏတဈဖွတျဖွတျပါမညျ။ ဆကျလကျဆှေးနှေးဖို့တှေ ကတော့ အမွောကျအမြား၊ တငျးကွမျးပငျ။
ခိုငျမာစဈမှနျသော ငွိမျးခမျြးရေးထူထောငျနိုငျမှ ပိုမိုပီပွငျအားကောငျးသော ဒီမိုကရစေီနှငျ့ ဖကျဒရယျ စနဈကို တရားမြှမြှတတ၊ တနျးတူညီမြှစှာ အနှဈသာရ ရှိရှိ တညျဆောကျနိုငျကွမညျဖွဈပွီး တိုငျးရငျးသား အားလုံးနှငျ့ ပွညျထောငျစုနိုငျငံတျောသညျ ကွီးပှား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျနိုငျမညျသာ။ အဓှနျ့ ရှညျနိုငျမညျသာ။
ကမျြးကိုးနှငျ့ ဆကျလကျလလေ့ာရနျ အညှနျး တခြို့ –
(၁) NCA နှငျ့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးမှုဆိုငျရာမူဘောငျ။
(၂) ခတျေရှုခငျး၊ အတှဲ (၁)၊ အမှတျ (၁)၊ ၂၀၁၄။
(၃) ဘာကွောငျ့ဖကျဒရယျလဲ၊ ဘာကွောငျ့ငွိမျးခမျြး ရေးလဲ အေးမောငျကြျော၊ ဇှနျ၊ ၂၀၁၃၊ ဓူဝံစာပေ)။
(၄) လဈဘရယျဒီမိုကရစေီ (မငျးတငျ၊ နိုဝငျဘာ၊ ၂၀၁၃၊ လူငယျတဈယောကျစာအုပျတိုကျ)။
(၆) ဖကျဒရယျနိုငျငံ (၅) နိုငျငံ၏ လကျနကျကိုငျ တပျဖှဲ့မြားဆိုငျရာ အခွခေံဥပဒနှေငျ့ ပွဋ်ဌာနျး ဥပဒမြေားတှငျ ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ့ လုပျပိုငျခှငျ့နှငျ့ အာဏာမြားကို နှိုငျးယှဉျသုံးသပျခွငျးနှငျ့ ထညျ့သှငျးစဉျးစားစရာမြား (MIPS – Myanmar Institute for Peace and Security) သုတသေန စာတမျး၊ MIPS, Dec, 2019 .